Mourinho oo ka hadlay ciyaariyahanada United iyo wararka sheegaya in shaqada laga ceyrinayo - Halbeeg News
Mourinho oo ka hadlay ciyaariyahanada United iyo wararka sheegaya in shaqada laga ceyrinayo
in Ciyaaraha, War Degdeg
Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Jose Mourinho ayaa sheegay in ciyaariyahanada qaar ee Manchester United u ciyaara ay ka dadaal badan yihiin ciyaarahano u ciyaara Manchester. Warkan ayuu yiri Murinho kadib markii kooxda Manchester United ay ku guul dareystay in ay wax guul ah gaarto kulamadii u danbeeyay ee ay ciyaartay.
Labadii kulan ee u danbeysay Manchester United wax ay marna barbar dhac la gashay kooxda Wolves waxa ayna guuldarro kala kulantay kooxda Westham taas oo sababtay in ay kaalinta 10-aad ka gasho kala horeynta horyaalka ingiriiska.
Manchester United ayaa ku bilaabatay xiliciyaareed kaan qaab liita, taas oo keentay in maamulka United cadaadis lagu saaro inay kooxda ka diraan tababaraha reer Portugal.
Wariyaha wayn ee Richard Keys ayaa baahiyay ku saabsan Mourinho, wuxuuna cadeeyay in tababaraha reer Portugal uu raadinayay muddo isbuucyo ah in laga diro kooxda United.
“Ma u malaynayo in Mourinho uu ka wal walsanyahay inuu waayo shaqadiisa, waxaan rumaysanahay inuu isagu uu isku dayayay muddo isbuucyo ah in la cayriyo, Jose dhawr maalin kale sii sug”. Richard Keys ayaa ku soo qoray bartiisa Twitter-ka.
Ma saxbaa in Zidane uu ku la soo xiriiray? Ayaa la weydiiyay Murinho wax uuna ku jawaabay “Su’aashaas waydii ninka kaa danbeeya (Saxafigii qoray warkaas) waayo isaga ayaa qoray sheekadaas”.
Manchester United oo guul daro ay ka soo gaartay West Ham United sabtigii ayaa habeen dambe marti qaadaysa Valencia.
Ra'iisul Wasaaraha oo guddoomiyey shir ku saabsan doorashooyinka 2020
Da' yarta isticmaasha baraha bulshada oo sharciyo cusub loo sameynayo